Ihe ngosi ndị a na-egosi n'ụzọ zuru ezu ihe HTC One M9 / HTC Hima ga-adị ka | Androidsis
Jiri nwayọ HTC na-agbake n’ahịa ya. Ihe ịga nke ọma nke otu ụzọ ya bụ isi ihe na-akpata nrụpụta akụ na ụba nke ndị Taiwanese. Anyị maara nke ahụ Na March 1, HTC ga-eweta onye nọchiri anya HTC One M8, HTC One M9 ma ọ bụ HTC Hima.
Ugbu a ụmụ okorobịa si Ekwentị Designer, site na ebe nrụọrụ weebụ Facebook ha, ebipụtala usoro nsụgharị nke na-egosi nkọwa niile nke HTC One M9. Nke a ọ ga-abụ mkpebi doro anya maka HTC flagship ọzọ?
Ha na-ebipụta ụfọdụ nsụgharị nke na-egosi nkọwa niile nke HTC One M9 / HTC Hima
O doro anya na ha bụ naanị nke ahụ, sụgharịrị, yabụ anyị enweghị ike ịkwado na nke a bụ ikpeazụ anya nke HTC One M9 / HTC Hima, ọ bụ ezie na anyị na-ahụ ihe oyiyi ndị na-agbapụta n'ime izu abụọ gara aga, anyị nwere ike iche na nke a ga-abụ atụmatụ nke onye ọzọ na-esote Otu Otu.
N'ileghachi anya na sụgharịrị ya, o doro anya na onye nrụpụta na-agbaso usoro imepụta nke ndị bu ya ụzọ ma na-enye HTC One M9 / HTC Hima ihe ọgbara ọhụrụ na gburugburu. Egosiputa ihe nha nke ndị okwu gị BoomSound, dị obere karịa ụdị ndị gara aga.
Mana nnukwu mgbanwe na-abata n’ime HTC One M9 ma ọ bụ HTC Hima. Asịrị na-egosi na ndị ọrụ Taiwan ga-esochi ihuenyo n'etiti 5 na 5.2 sentimita asatọ nke ga-eru mkpebi nke pikselụ 1440 x 2560.
Obi silicon ya ga-abụ ihe nhazi Qualcomm Snapdragon 810 yana Adreno 430 GPU ya na 3 GB nke RAM. Ọnụ a na-atụ anya inwe 32 GB nke nchekwa dị n'ime, ọ bụ ezie na anyị amaghị ma ọ ga-enwe nkwado maka kaadị micro SD.
Banyere igwefoto, a 20 megapixel igwefoto, na mgbakwunye na 13 megapixel n'ihu, na-apụ na teknụzụ UltraPixel nke nyela onye nrụpụta ọtụtụ isi ọwụwa. Android 5.0.2 L ga-ahụ maka ịdegharị HTC Hima, n'okpuru usoro akwa Sense 7 nke onye nrụpụta Taiwanese.
Banyere price na igba egbe ụbọchị, na-ewere n'ime akaụntụ na HTC One M9 ga-ọkọnọ na March 1, anyị nwere ike na-atụ anya na - banye ahịa n'ime ọnwa Eprel, Nwere ike kacha ọhụrụ.
N'ileghachi anya na ọnụahịa nke ndị bu ya ụzọ, o yikarịrị ka HTC Hima ga-apụta na ọnụego nke 699 euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC » Nsụgharị ndị a na-egosi n'ụzọ zuru ezu ihe HTC One M9 / HTC Hima ga-adị
Aghọtaghị m ihe kpatara igwefoto na-eme jọrọ njọ ... wdg! Ewezuga ihuenyo ahụ dị ịtụnanya!
Naanị ọmarịcha! Dị ka naanị HTC maara otú e si eme ya… ekele HTC!
echere m na nke a na-arịa ọrịa… i mean seriously its looks awsome mannn
Ahụghị m ihe kpatara ha ji sị igwefoto jọrọ njọ?! Kedu ka ọ ga-esi bụrụ ihe mmetụta dị otú ahụ?! Nhazi ahụ dị ịtụnanya! Bọtịnụ ndị dị n'akụkụ, belata nha nke okpokolo agba, kpochapụ eriri ojii, na-edebe micro sd ma nwekwuo igwefoto, ebe nchekwa ram na processor ... Amaghị m ihe ị chere, mana nke a dị ka ekwentị si 2015, ma lezie anya maka onye kacha ere! Nke a abụghị oops, HTC mere ya ọzọ, nke a ga-abụ, HTC gịnị ka ị mere?! Haha imewe ahụ bụ ọrụ ebube, enwere m olileanya na ọ dị adị n'ihi na ọ bụrụ otú ahụ, m ṅụrụ iyi na m erere LG m wee gbaa ọsọ zụta ya.
O doro anya na onye nrụpụta a bụ nke kachasị mma, aga m azụ M8 m maka mkpuru a.
Zaghachi Diego Rueda
Are bụ Nnukwu Htc !!! dị egwu !! ma oburu na azum ya !!
nsogbu bụ na "gụọ nke ọma" kwuru (nsụgharị) Enwere m olileanya na ọ bụ otú ahụ n'ezie!
mana ịbụ htc ndị ọzọ na ee! 😀
ps: na Aifon 6 .. HTC M9 GENTLEMEN!